Kuya kufuneka siyeke ukuthetha ukuba nefuthe xa sithetha ukuduma | Martech Zone
NgoMgqibelo, Disemba 29, 2012 NgoMgqibelo, Disemba 29, 2012 Douglas Karr
Ndiyibonile kwakhona namhlanje… olunye uludwe lwabaphembeleli abango-2012. Andikwazi ukulufumana lonke uluhlu, nangona kunjalo, kuba bendixakeke kakhulu ndibeka iinzipho zam phantsi kobuso bam kwaye ndikhupha iinwele zam. Kwakungekho uluhlu lwabaphembeleli konke konke, lwaluluhlu nje olunye lokuthandwa. Ukuqiniseka ukuba sonke siyawuqonda umohluko, masiqhubeke kwaye sichaze ezi zinto zimbini:
Popular: Ukuthandwa, ukunconywa, okanye ukonwatyelwa ngabantu abaninzi okanye ngumntu othile okanye iqela elithile.
Unempembelelo: Ukuba nefuthe elikhulu emntwini okanye kwinto ethile.
Kubathengisi bakho phaya, kukho umahluko omkhulu phakathi kwezi zimbini. Ngu iibhola zamehlo xa kuthelekiswa nenjongo. Ukuba ufuna abantu abaninzi ukuba ukubona izinto zakho… yiya kukuthandwa. Kodwa ukuba ufuna abantu abaninzi ukuba kuthenga Izinto zakho… yiya kwimpembelelo. Abantu abadumileyo okanye iimveliso banabantu abaninzi ezifana kubo. Abantu abanefuthe okanye iimveliso banabantu abathi themba kubo.
Ngaba awuyifumani? Omnye woomama abaziwa kakhulu ngo-2012 nguNicole “Snooki” Polizzi. Kwi-Twitter, uSnooki unabalandeli abayi-6.1 yezigidi. USnooki unamanqaku eKlout angama-88. Izihloko zikaSnooki kubandakanya ukufota, ipitsa, ukubhaka, umkhosi, kunye nezihlangu. Igama likaSnooki likwafana nokuba ngumama kulo nyaka kuluhlu oluninzi.
Ngokuqinisekileyo uSnooki kunjalo ethandwayo. Kodwa nokuba awukho okunempembelelo kwezi zihloko zinokuphikiswa. Abantu banokujonga ku-Snooki ngezitayile zezihlangu zamva nje kuba eyopopu ... kodwa uyathandabuza ukuba uzokunceda ekuchaphazeleni uluvo lwakho ekuthengweni kwekhamera elandelayo, ukuthengwa kwe-pizza, umbuzo wamandla oxhobileyo, iresiphi yokubhaka okanye umbuzo wokuba ngumzali. Andinkqonkqozi Snooki… ndikhomba nje ukuba uSnooki uthandwa kakhulu, kodwa unefuthe elithandabuzekayo.
Ingxaki zezi mpe mbelelo amanqaku kunye noluhlu azinampembelelo kwaphela. Uluhlu lweSnooki njengempembelelo ayisiyonyani. Ukuba ndifuna uluvo ngokufota, ndiza kufuna UPaul D'Andrea. Ipitsa? Ndiya kumhlobo wam uJames ongumnini Brozinni's. Ukubhaka? Umama wam.
Ufumana inqaku. Kodwa ngaba uyabona into malunga neempembelelo zam? Abadumi kwaye abanazigidi zabalandeli okanye abalandeli. Bathembekile kuba ndibakhele ubudlelwane kunye nabo bonke ixesha elingaphezulu kwaye bayifumene intembeko yam. Andikuthethi ukuba abantu abadumileyo banokuba nefuthe… baninzi. Nangona kunjalo, ndenza isaphulelo sokuba ukuze ube nefuthe, umntu kufuneka athandwe. Akunjalo.
Njengomzekelo wobuqu, ndiyazi ukuba ndibenjalo okunempembelelo kwindawo yetekhnoloji yentengiso. Ndibonisene ngaphezulu kwe- $ 500 yezigidi zokuthenga kunye notyalo-mali kule minyaka imbalwa idlulileyo kwaye ndinike isikhokelo esihle kwiinkampani ezininzi. Oko kwathethi, andithandwa kwindawo. Awuyi kundifumana kwi-10 ephezulu yezintlu ezininzi kwaye andiyikukhanyisa imicimbi kwimidiya yoluntu kunye nentengiso. Ndiyakholelwa, ukuba uluhlu lwalunokubhalwa ngokusekwe kubunkokheli kushishino kunye nokuzithemba, ndingazifumana ndikwindawo ephezulu kakhulu. Ayisosikhalazo eso… kukujonga nje.
Kufuneka sifumane indlela yokwahlula ngcono phakathi kwempembelelo kunye nokuthandwa, nangona kunjalo. Abathengisi kufuneka bachonge abachaphazeli kwaye batyale imali kunye nabashukumisayo ukunceda ukwabelana ngeemveliso zabo kunye neenkonzo. Nangona kunjalo, abathengisi kufuneka bakuphephe ukuchitha imali kwabo badumileyo kwaye abachaphazeli nantoni na.
tags: mpe mbelelookunempembeleloethandwayoukuthandwa
Ngomhla wama-30 ku-Disemba 2012 ngo-6: 25 PM
Ndicinga ukuba sidinga udidi lwesithathu ngaphaya "kokuthandwa" kunye "nokuchaphazeleka" olubonakalayo nje. Andizukuphikisa ukuba uSnooki yiyo yonke le nto ithandwayo ("uthanda, uyathandwa okanye uyonwabele") njengoko ebonakala kakhulu.
Enkosi ngokwabelana, nangona kunjalo, Doug!
Ngomhla wama-30 ku-Disemba 2012 ngo-11: 38 PM
UDouglas, njengoko ubonile, thina kwiNtaka encinci sikholelwa ukuba ukuthandwa phakathi kweengcali zezihloko ze-niche yummeli olungileyo kwicala lempembelelo, ubuchwephesha, njl njl. Ngaba oko kuyenza kakuhle imbono yakho njengendlela engcono yokulinganisa impembelelo?
Ngomhla wama-31 ku-Disemba 2012 ngo-5: 03 AM
Molo @marshallkirkpatrick: disqus! Intaka encinci yenza umsebenzi omkhulu kangaka ekunikezeleni ngemilinganiselo eyahlukeneyo yesihloko esinikiweyo esikwaziyo ukubona abachaphazelayo. Nokuba ngaphakathi kwe-niche kukho iingozi ekujongeni ukuthandwa kuphela. Ndiyazibuza ukuba ngaba zikhona na izinto ezinje ngee -weetweets, ulwabelwano olongezelelweyo, njl.njl. Ngokunikwa iiakhawunti ezimbini ze-twitter-enye inabalandeli abaninzi kwaye enye inabalandeli abambalwa kodwa i-retweets ezingaphezulu- ndingagxila kokugqibela.
Ngomhla wama-31 ku-Disemba 2012 ngo-4: 48 PM
UDouglass, enkosi ngokubhala oku. Kodwa ngoku KUFUNEKA ndibuze ukuba kuthetha ntoni oku: “Intaka encinci yenza umsebenzi omkhulu kangaka ekunikezeleni ngemilinganiselo eyahlukeneyo ye
ngesihloko esinikwe sona ukuba sikwazi ukubona abachaphazeli. ”
Ndingumthathi-nxaxheba we-beta eNcinci encinci kodwa andisiboni esi sisixhobo esiluncedo kum. Ngokucacileyo ndilahlekelwe yinto kwaye kukho into oyifumanayo kolu luvo. Ndicela undijonge ngakumbi? Enkosi kakhulu.
Ngomhla wama-31 ku-Disemba 2012 ngo-11: 04 PM
Molo @ google-8dffa4a27cb92d8c652480f605a5a5bb: disqus -Nentaka encinci, ndiyayithanda inyani yokuba umsebenzi yenye yeefilitha kwaye ndingayithelekisa imisebenzi, ukumamela, kunye neenkokheli zezihloko ngokuchasene neyona kholamu ilandelweyo. Ayivelisi uluhlu lwangoku lweempembelelo, kodwa iyandinceda ukuba ndibuyele ngapha nangapha kwaye ndenze uhlalutyo ngakumbi lweeakhawunti.
Inyaniso mayixelelwe, izixhobo ezinje zazingezizo izizathu zokubhala le post. Lonke uluhlu lwezinto ezingafunekiyo eziphezulu ze-2012 ezandikhuthazayo. Ndiyazithanda izixhobo ezinje ngeKlout, ii-Appinion, kunye neNcinci yeNtshontsho- abazama ukwenza ubuchule bokubonelela ngeziphumo ezingcono. Ingxaki enzima!
Jan 2, 2013 ngo-3: 53 PM
UDouglas-Kulungile ukubona ukuba usabhabha iflegi kule ngxaki. Sichithe ixesha elithile sizama ukufundisa abantu ngalo mbandela. Jonga ividiyo esiyivelisileyo kutshanje efumana intliziyo yesithuba sakho. http://appinions.com/videos/the-true-meaning-of-influence/ Qhubeleka nomsebenzi omhle.